Efere nke ọma
1.Used maka obere ogbe sample amplification mmeghachi omume ule, ike ga-eji otu ma ọ bụ njem. CORBITION PCR tubes sitere na UPS larịị ahụike Polypropylene. Tubes niile dakọtara na ọkọlọtọ 96 nke ọma. Nhazi nke mgbidi dị mkpa iji mee ka ikpo ọkụ dịkwuo mma. Uko akara okpu gbochie sample evaporation. A na-enweta tubụ n'ọtụtụ ikike maka nchekwa nchekwa dị iche iche.
0,1 ml, 0,2 ml, otu na 8 warara, transperent na ọcha na agba, ewepụghị okpu na domed okpu nwere ike ịbụ nhọrọ. A na-enweta tubes 0.1 ml na opaque ọcha maka mgbaàmà dị elu na nyocha nyocha. PCR tube bụ ezigbo ngwaahịa maka PCR ngwa ngwa na obere olu mmeghachi omume. Tubes niile anaghị akwụ ụgwọ DNase, enweghị RNase, na-abụghị pyrogenic.
2. Octet PCR njikwa usoro
Achọpụtaghị ogo ngwaahịa ahụ na usoro mmepụta. Teknụzụ na-emepụta teknụzụ dị elu yana akụrụngwa dị elu bụ njirimara ngwaahịa mma. Ihe nyocha PCR na-elebara mgbidi anya nke ihe PCR anya, ọ dịkwa mkpa ka ọ bụrụ na ị ga-ahụ ọkụ ọkụ ọkụ. A na-ebugharị ọkụ n'otu ihe nlele na PCR octuplets iji nweta izi ezi nke nsonaazụ nnwale.
3, na-enyo enyo,
N'ihi ọdịdị nke ihe eji arụ ọrụ PCR nke fluorisenti kachasị dị mkpa, ekwesiri ka a duzie ụzọ ọkụ site na elu nke a na-eri na nke tube ahụ, yabụ mkpapụta nghọta nke ihe oriri ga-adị oke elu.
Ọrụ akara nke mkpuchi tube na tube ahụ kwesịrị ịdị mma karịsịa iji gbochie evaporation sample na tube, zere nje na-efe efe, ma hụ na nke ziri ezi nke nnwale ahụ!
5. Mmepụta gburugburu ebe obibi
Site na ezigbo akụrụngwa, ebe obibi dị ọcha dịkwa oke mkpa. Ọ bụrụ na emetọ ihe nlele ahụ site na ihe ruru unyi, nsonaazụ ya ga-abụ ihe na-ezighi ezi. Ihe kpatara nyocha ahụ na-ewe oge ma na-ewekwa oge. Jighi a mmepụta àgwà njikwa nwere ike hụ na arụmọrụ nke ọ bụla ogbe nke ngwaahịa. Anụ iji hụ na izi ezi na imeghachi ihe omumu data
1.Nhọrọ nke oke nghọta dị na polypropylene ihe, enweghị ọdịda.
2. Enweghị DNA ma ọ bụ RNA enzymes.
The ultra-mkpa edo tube mgbidi na-ghọtara site nkenke ebu imewe. The ultra-mkpa edo tube mgbidi na-enye magburu onwe okpomọkụ conduction mmetụta na-akwalite maximization nke sample amplification.
4.Cover na-ejidechi ọkpọkọ ọkpọ iji gbochie mmetọ.
5.The ngwaahịa adabara ọtụtụ fluorescent PCR ngwá.
6.Made si UPS Plastic Class VI Polypropylene.
7. Kwekọrọ na ọkọlọtọ 96 nke ọma
8.Thin-mgbidi maka mma okpomọkụ ebufe Dị na uzo na-acha ọcha na agba, ewepụghị okpu na domed okpu
9.Tight akara okpu imewe iji gbochie sample evaporation
10.Serile iru SAL larịị 10-6
MBA. Nkọwa Mpịakọta Okpu Nkọwa Mbukota Ntughari nwa nwoke
PC1001 PCR ọkpọkọ 0.2ml Ewepụghị ma ọ bụ Dome Na-alụbeghị di 20000 / Ctns nhọrọ
PC0021 8-nke ọma PCR warara 0.2ml Ewepụghị 8 warara 5000 / Ctns nhọrọ
PC0050 Micro PCR ọkpọkọ 25nke Ewepụghị Na-alụbeghị di 12000 / Ctns nhọrọ
PC0051 8-nke ọma PCR warara 0.1ml Ewepụghị 8 warara 5000 / Ctns nhọrọ
PC0059 PCR ọkpọkọ 0.1ml Ewepụghị Na-alụbeghị di 2500 / akpa ma ọ bụ 10000 / bag nhọrọ
Nke gara aga: Atụmatụ Pipette
Osote: Efere PCR
PC0021 0.2ml 8 warara PCR tube
PC0050 25ul Micro PCR tube
PC0051 0.1ml 8 warara PCR tube
PC1001 0.2ml PCR tube ewepụghị & dome okpu
Viral DNA / RNA Ihe ntinye (Kọlụm)